သွားဖုံးရောင်၊ သွားကိုက်ဝေဒနာတွေ အတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလေးများ…! Post Detail | Razzwire
သွားဖုံးရောင်၊ သွားကိုက်ဝေဒနာတွေ အတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလေးများ…!
သွားကိုက်ဝေဒနာဆိုရင် ယောက်ျားတွေတောင် ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပါဘူး။ သွားကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအပထား၊ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းရှာဖို့က အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မှီခိုအားထားကြပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသိပ်များလွန်းတာက တကယ်တော့ ကိုယ်ခံအား ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနည်းတွေကို ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီ
ပဋိဇီဝအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကြက်သွန်နီကို သွားကိုက်ဝေဒနာကုသရာမှာ အသုံးပြု အကြံပြုထားပါတယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု လျော့နည်းသက်သာအောင် ကြက်သွန်ဖြူ ၁မွှာ၊ ၂မွှာ ကိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ် ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ဆားရောစပ်ပြီး ကိုက်ခဲတဲ့သွားပေါ် လိမ်းပေးပါ။ ဝေဒနာပျောက်ကင်းစေဖို့ အာမခံပါတယ်။
ပူစီနံတီးက ခံတွင်းအတွက်သာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ သွားကိုက်ဝေဒနာပါ သက်သာစေပါတယ်။ ရေနွေးခွက်ထဲ ပူစီနံရွက်ခြောက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁) ဇွန်းထည့်ပြီး မိနစ် ၂၀ စိမ်ပါ။ အေးတဲ့အခါ ပလုတ်ကျင်းပြီး ပြန်ထွေးထုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီတိုင်း ထပ်ခါထပ်ခါပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သွားကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေအတွက် ကြက်သွန်နီဝါးပေးခြင်းက အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကို နာကျင်ကိုက်ခဲမှု သက်သာစေနိုင်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးအစွမ်းသတ္တိတွေကြောင့် လူသိများပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ ရောဂါကူးစက်မှု လျော့နည်းစေပါတယ်။ သွားကိုက်ဝေဒနာခံစားရပါက ချက်ချင်း ကြက်သွန်နီကိုက်ပေးပါ။ သွားပေါ် အချပ်လိုက်လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီ ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားတွေ တဒုတ်ဒုတ်ကိုက်ခဲနေပါက နည်းလမ်းတစ်ခုက သွားပေါ် လေးညှင်းပွင့်ဆီတွေ လိမ်းပေးဖို့ပါပဲ။ လေးညှင်းပွင့်ဆီမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုသေစေနိုင်တဲ့သတ္တိတွေပါဝင်ပြီး အကိုက်အခဲပျောက်ကင်းစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိအတွက် လူသိများပါတယ်။ စစလိမ်းချင်းမှာ နာကျင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သက်သာစေပါတယ်။
ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲ ဆား (၁) ဇွန်း ခပ်ထည့်၊ သေချာမွှေပေးပြီး အဲဒီအရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးရုံလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖုံးရောင်၊ သွားကိုက်ဝေဒနာတွေ လျော့နည်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။